नेपालमा फेरि मनसुन सक्रिय, कहाँ–कहाँ हुँदैछ भारी वर्षा ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
काठमाडौंः वर्षा गराउने न्यूनचापीय रेखा पुनः नेपाल नजिक आउने भएको छ ।
विगत एक साता नेपालबाट दक्षिणतिर न्यूनचापीय रेखा कायम रहेको थियो । त्यो रेखा नेपालतिर आउँदै गर्दा पुनः नेपालमा मनसुनी गतिविधि बढ्ने सम्भावना देखिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।
मौसमविद् शान्ति कँडेलका अनुसार न्यूनचापीय रेखा उत्तरतर्फ सर्दैछ । त्यसपछि नेपाल नजिक आइपुग्नेछ । त्यसैका कारण शनिबारदेखि नेपालमा मनसुन सक्रिय हुने क्रम बढ्ने उनले बताए ।
विशेष गरी प्रदेश १, २ र बाग्मती प्रदेशमा वर्षा हुने सम्भावना छ । यस क्षेत्रका केही स्थानमा ठूलो वर्षा हुनेछ ।
मनसुनी रेखा नेपालतर्फ अगाडि बढ्दा त्यसको असर भने शुक्रबारदेखि नै नेपालमा देखिन थालेको छ । महाशाखाका अनुसार आगामी तीन दिन देशका विभिन्न स्थानमा हल्का, मध्यमदेखि ठूलो वर्षा हुनेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज कहाँ–कहाँ हुँदैछ चट्याङ्गसहित भारी वर्षा ? (सूचीसहित)
ट्याग्स: मनसुन, मौसम पूर्वानुमान महाशाखा, वर्षा